Maxaa Hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha ka hor taagan daabacaaada baasaboorka Soomaaliga? – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 2nd February 2019 035
Magaalada Muqdisho dad badan ayaa caqabad adag kala kulmay helidda baasaboorka Soomaaliga, waxaana lagu waramayaa in la joojiyay daabacaada baasaboorka.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay inaan la daabicin wax baasaboor ah, waxaana kordhay tirada dadka dalbanaya baasaboor ee maalin walbaa lagu balamiyo magaalada Muqdisho, sida xogaha aan ku heleyno.
Dadka dhibaatada haysata waxaa ka mid ah dad u ambabixi lahaa arrimo caafimaad, qaar u bixi lahaa waxbarasho & kuwa ganacsi dalka dibadiisa u aadi lahaa, dadkaasi oo dhan waxa ay u xaniban yihiin Baasaboorka Somaliga.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in sababta arinta ka dambeysa ay tahay in qandaraaska uu ka dhacay shirkadii daabici jirtay baasaboorka Soomaaliga, islamarkaana shirkad cusub la siiyay qandaraaskaasi, iyadoo wali aysan shaqo bilaabin.
Top News: Ex- RW Cabdiweli oo madaxda dalka runta indhaha ka saarey, isagoona sheegey………
Madaxweynaha Uganda 5000 Askari u soo diraya Soomaaliya [Akhriso shuruud uu ku xiray]